Izay mba hihaona vehivavy: amin'ny aterineto sy ivelan'ny aterineto vato nasondrotry ny tokan-tena
Izay mba hihaona vehivavy: amin’ny aterineto sy ivelan’ny aterineto vato nasondrotry ny tokan-tena
Fivoriana ny vehivavy tokan-tena toa tahaka ny taloha ho mahitsy. Ny grandad manambady ny zazavavy varavarana manaraka ny dada nitsena ny neny amin’ny oniversite.
Ary amin’izao fotoana izao? Tsara, ny fivoriana ny vehivavy ao amin’ny trano fisotroana na fikambanana dia toy ny easy — raha toa ka ianao ao an-dia izay. Fa inona no mitranga rehefa efa omby intsony ny club-toerana, sy ny sisa amin’ny fiainanao (ary ny an-trano an-tanàna) aoriana ianao? Ho an’ny maro be professional olona mampiaraka rehefa avy, ary mihoatra noho izany, dia mety ho sarotra ny mahalala izay mba hihaona ny vehivavy. Kanefa aza kivy: mahaliana, feno ny vehivavy tokan-tena dia avy any — ary efa nandinika ny mety ho dimy toerana izay afaka hitsena azy. Ho an’ny maro tokan-tena, matihanina ny olona manontany tena hoe aiza no hihaona ny vehivavy, ny birao dia afaka toa toy ny voajanahary toerana hanombohana. Rehefa dinihina tokoa, dia mandany ora maro amin’ny mpiara-miasa isan-kerinandro, izay midika fa tsy hahafantatra azy ireo ny tena tsara. Tsy sarotra ny sary an-tsaina ny toeram-piasana namana mora foana ho lasa zavatra bebe kokoa. Mazava ho azy, na raha toa ianao asa izay birao mampiaraka dia navela, dia mety ho sarotra ny mahafantatra raha ny vehivavy no famantarana mampiseho fa tiany ianao, na raha toa izy fotsiny hoe mahalala, satria ianareo dia miara-miasa. Faharoa, tsy maintsy mihevitra ny maharitra ny vokatra. Milaza zavatra eo manao fanazaran — tena ve ianao te-miasa lafiny amin’ny lafiny miaraka amin’ny olon-tiany? Na, na dia ratsy kokoa, raha ny zavatra handeha miendrika poara — tianao ve ny ho fandaniana andro rehetra isan-andro ny taloha? Dia efa tonga any rehetra. Ianao mipetraka eo ambanin’ny tany, na mandeha eo amin’ny milina fitotoana, ary ny olona mandeha an-tongotra lasa izay no mahatonga ny kibony no kely handrehitra. Eny tokoa, gyms sy ny fiaran-dalamby sy ny hafa eny amin’ny toeram-bahoaka dia feno tsara tarehy, matanjaka ny vehivavy, koa midika ve izany fa izy no toerana tsara mba hahita ny lalao? Ao amin’ny teny, tsy misy. Rom coms milaza fa ireo ‘hihaona-manondraka voninkazo’ no anisan’ny fomba tsara indrindra mba hihaona ny vehivavy, fa ny tena zava-misy dia samy hafa lavitra. Fa tsara tarehy ny vehivavy eo amin’ny fiaran-dalamby? Izy efa ela ny andro any am-piasana, ary te-hahazo an-trano sy ny fiovana ho sasany comfy kiraro. Izy tsy mieritreritra ny momba ny fiarahana. Fa tovovavy mahafatifaty manerana ny fanaovana fanatanjahan-tena? Izy no nahazo enina hafa karazana crunches mandeha, ary avy eo amin’ny toeram-pitrandrahana ny lakana milina. Mampiaraka dia tsy ny laharam-pahamehana amin’izao fotoana izao. Ny zava-misy dia, ny toerana iray ihany ny ampahany amin’ny where-to-hihaona-vehivavy puzzle. Ny fotoana dia manan-danja toy izany ary, ny zava-misy, izay mandondòna ny hihaona-mahafatifaty avy ny fifandirana. Izany no iray amin’ireo potika ny toro-hevitra dished avy ny olona manontany tena hoe aiza no hihaona ny vehivavy, ary vehivavy manontany tena hoe aiza ny hihaona olona: raha te-hijanona ho mpitovo, hitondra ny fialam-boly. Amin’ny foto-pisainana, izany no hevitra lehibe. Ianao manao zavatra ianao fitiavana, amin’ny olona izay tia azy koa, izay mahatonga resaka mora. Ary izay tsy te-fifandraisana amin’ny olona iray izay dia mizara ny tombontsoa? Mazava ho azy, izany dia rosy view jerena, dia hoatran’ny hoe izany fotsiny tokan-tena olona izay manana ny fialam-boly, raha ny marina, ny mpivady matetika hampiasa azy ireo mba andevo. Alaivo sary an-tsaina: ianao maka ny fandrahoan-tsakafo, ny mpianatra manantena ny hihaona manokana ny ramatoa — ary fotsiny ianao sy efatra mpivady.
Izany tsy hoe tsy mahafeno tsara ny vehivavy avy amin’ny fialam-boly, mihoatra noho izany dia tokony hanao ny lokan ‘ ny fialam-boly fotsiny ny laharam-pahamehana: misy olon-tiany fotsiny mahafinaritra bonus. Araka ny ny fanadihadiana atao amin’ny fampakaram-bady tranonkala Ny Fatotra, manodidina ny mpivady nihaona ny vadiny tamin’ny alalan’ny namana na ny fianakaviana iray isan-jato faharoa afa-tsy ireo izay nihaona ny lalao an-tserasera. Dia toa tahaka ny efa misintona hevitra — fa izany no hitranga. Indray andro manontany tena ianao hoe aiza ny hihaona vehivavy, ary avy eo dia ny manaraka ny vady Dave manasa anao ny pub, tsy hihaona ny namana Lucy, sy ny fanidin’ny kilalaon’afo. Na izany aza, mendrika marihana ihany koa fa ny fianakaviana sy ny namana ihany no tsy maintsy voafetra ny dobo mba haka avy. Raha hiteny, dia ianao no ho miakatra bandy mitady vehivavy tokan-tena ny, na ianao tokana dada hieritreritra ny hampiaraka iray neny, dia mety hahita fa sarotra ny manana ny antsipiriany nihaona. Ankoatra izany, dia mihazakazaka ho izany olana mitranga izany amin’ny birao mampiaraka — tena fotsiny koa inter-mifandray. Raha toa ianao sy i Lucy handrava, ireo pub alina amin’ny Dave mety hahazo tena hafahafa. Azo antoka fa, izahay tsy marina tsy miangatra. Fa, amin’ny vato nasondrotry ny tokan-tena, tena mino isika fa ny fiarahana amin’ny aterineto ny tokan-tena fomba tsara indrindra ny mahita mpiara-miasa. Izany fotsiny dia mahatonga ny azo ampiharina dikany: te mba hihaona ny vehivavy tokan-tena, ianao izay iray ny olona. Plus, hisafidy ny tsara online dating site, ary afaka mahazo manokana momba ny karazana vehivavy sy ny karazana fifandraisana ianao mitady. Raha te-tena mifanentana, ny fiarahana amin’ny aterineto dia manome anao ny tsara indrindra ny vintana ny fahombiazana. Ny antony lehibe indrindra izahay ka resy lahatra fa ny fiarahana amin’ny aterineto no toerana mba hitsena ny vehivavy? Mahafantatra isika miasa. Isan’andro isika no mandre ny tena fiainana tantaram-pahombiazana ny mpivady izay mahatsapa fa ny fitiavana eo amin’ny toerana. Ary ianao mety ho ny iray amin’izy ireo. Ny takiana amin’izany rehetra izany dia mitady ao an-toerana.
Fahombiazana vinavina: Avo
Haka ny tsara fanompoana mampiaraka ary izany dia manampy anao hihaona iray, mifanaraka vehivavy Raha te-hihaona nahasarika, mifanaraka ny vehivavy tokan-tena be dia be ny tolotra, vato nasondrotry ny tokan-tena dia toerana lehibe hanombohana. Rehefa hiditra amin’ny toerana, ary hamita ny mombamomba azy isika dia hitondra anao — lalao soso-kevitra tsirairay sy ny isan ‘ andro: ny vehivavy izay mihevitra isika fa tena hifanaraka anao. Ahoana no ahafahantsika manao izany antso izany? Tsara, rehefa sonia ho amin’ny vato nasondrotry ny tokan-tena, ianao maka ny fanadihadiana lalina ny toetra test. Izany dia manome fahafahana antsika mba tena mahazo ny mahafantatra anao, ary inona no tadiavinao ao ny mpiara-miasa. Ny fomba fiainana, ny toerana, ny fifandraisana fanantenana isika handray ireo rehetra ireo ho any ny kaonty, rehefa nilaza ny lalao. Noho izany, raha manontany tena ianao hoe aiza ny hihaona ny vehivavy, ny valiny dia tsotra — ny vato nasondrotry ny tokan-tena mifanandrify amin’ny fanompoana izy ireo, dia ho tonga aminao. Ianao ho be atao ny olona, manontany tena hoe ahoana no mahazo sipa koa raha juggling namana, fianakaviana, ary nandroso ny asa? Vato nasondrotry ny tokan-tena dia eto mba hanampy. Ny tanteraka optimisé toerana dia natao amin’ny tokan-tena sahirana ao an-tsaina ny mahomby matchmaking soso-kevitra mety hanampy anao hanova ny fitiavana ny fiainana. Raha te-streamline ny fiarahana dingana kokoa, dia afaka miezaka ny matavy mampiaraka an-tserasera fampiharana. Mandroso ho ampiasaina amin’ny iOS sy Android, ny fiarahana amin’ny fampiharana ny fomba tonga lafatra ny daty-ny-mandeha: fanavaozana ny mombamomba azy na eo amin’ny filaharana ao amin’ny Sakafo Rehetra, handefa hafatra amin’ny fanaovana fanatanjahan-tena, ny daty eo amin’ny teny. Ka inona no karazana tokana ny vehivavy hampiasa ny site? Tsara, ho an’ny hanombohana, ry zareo tanteraka: ny mpampiasa dia nahita fianarana mba hahazoana mari-dia ny ambaratonga na ny mari-Pahaizana ambony, izay midika fa ny vehivavy izay mampiasa vato nasondrotry ny tokan-tena dia mahaliana sy ara-tsaina, miaraka amin’ny maro ao amin’ny voalohany ny ny asany. Faharoa, eo ho eo amin’ny faha -, izy ireo amin’ny fotoana eo amin’ny fiainan’izy ireo izay mitady ny manan-danja mitovy. Ny zava-tsarotra? Na ianao mitady vehivavy, ny fiarahana ao anatin’ny s, na ianao liana kokoa amin’ny mampiaraka ny vehivavy anti-panahy, dia afaka hihaona olona mahafinaritra ao amin’ny vato nasondrotry ny tokan-tena. Amin’ny tokan-tena Sangany isika mahatakatra fa ny fahafantarana ny toerana mba hitsena ny vehivavy dia iray monja anisan’ny fanaovana lalao mahomby. Marina mifanentana midina be kokoa: nizara fiaviana, nizara ny soatoavina, nizara ny nofy. Izany no mahatonga isika dia mamporisika ny fahasamihafana eo amin’ny vohikala — izany no fomba tsara indrindra mba hitady olona iray mba hizara ny fiainanao. Angamba ianao mitady manokana toy ny vehivavy tokan-tena any Londres, angamba fotsiny ianao mitady vehivavy izay te-zavatra maharitra — na inona na inona ny tian’ny manokana, izahay afaka manampy. Izany rehetra izany dia manomboka amin’ny fidirana ny toerana sy ny hoe salama — moa ve ianao vonona ny hanomboka
Sary mahafinaritra →